Tele RELAY တစ်ခု - điသစ်ကိုစမတ်ဖုန်း stabilizer သည်đi Osmo မိုဘိုင်း3ထုတ်ဖော်ပြသ
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "điသစ်ကိုစမတ်ဖုန်း stabilizer သည်đi Osmo မိုဘိုင်း3ထုတ်ဖော်ပြသ
điသစ်ကိုစမတ်ဖုန်း stabilizer သည်đi Osmo မိုဘိုင်း3ထုတ်ဖော်ပြသ
နာမခံထိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးများအတွက်တစ်ဦး stabilizer ကိုအသုံးပြုဖို့နီးပါးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုယခုရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းများအတွက်အပါအဝငျ။ ထိုအđi, ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသောđi Osmo မိုဘိုင်း3က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက đi တရားဝင် Ronin SC, ဟိုက်ဘရစ်ကင်မရာများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ stabilizer ပြသလိုက်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့ရညျအသှေးကိုဗီဒီယိုအောင်မြင်ရန်ရန်အသုံးပြုလျှင်တစ်ဦးက play ရမယ် - နှင့်သင်သည်သင်၏ကြည့်ရှုရန်ခေါင်းကိုက်ပေးချင်ကြပါဘူး - ။ သင်တစ်ဦးနှင့်ညီမျှပေမယ့်စမတ်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သင်တို့ကိုလည်း၎င်းတို့၏အကွာအဝေး Osmo နှင့်အတူလိုအပ်သောအရာကိုရှိပါတယ်။ ယနေ့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှုထုတ်ဖော်ပြသ, đi Osmo မိုဘိုင်း 3စမတ်ဖုန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, နှင့်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကအပျော်တမ်းအများအပြားအိတ်တစ်ရာအရပျကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ပြီးသားမရှိမဖြစ်၏တင်ပြချက်။
điသစ်ကိုစမတ်ဖုန်း stabilizer ထုတ်ဖော်ပြသ
၎င်း၏အမည်ကိုအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ဒီđiလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တတိယမိုဘိုင်း stabilizer ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းစွာအချို့သောအသုံးပြုသူများသည် Osmo မိုဘိုင်း2နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန်အများစုဖျက်ခြင်းသည်သူ၏မိတ္တူကိုဆုံးကြောင်းပုံရသည်။ ပထမဦးစွာ Osmo မိုဘိုင်း3ခေါက်သိမ်းသည်ကိုသိမှတ်ပါက ပို. ပင်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာမေ့လျော့လိမ့်မည်။ သူကခေါက်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့အလွန်အခြေခံဖြစ်ခြင်းမပါဘဲမ Osmo မိုဘိုင်း 2, ကအိတ်သို့ fit မှတစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးခက်ခဲပေလိမ့်မည်။
foldable đi Osmo မိုဘိုင်း 3,
ငါတို့သည်လည်းအသုံးပြုသူများကို click တစ်ချက်နှင့်အတူဦးတည်ချက်နှင့် mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်သောလွှတ်ပေးရန်ခလုတ်ကိုအဖြစ်, ဒီတတိယကြားမှာအတွက်မူရင်းမော်ဒယ်ရဲ့ features တွေကိုအချို့ကိုရှာပါ။ နယူးရွေးချယ်စရာလည်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဒီဇိုင်နာများတစ်ပဲ့ထိန်းစနစ်ကနေတဆင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသူတို့၏ဇာတ်လမ်းများစုဝေးဖို့ကူညီပေးသည်ကြောင်းပုံပြင် mode ကိုအတိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံထားလျှောက်လွှာđiလာတဲ့ MIMO အတွက်ထွန်းသစ်စနေကြသည်။ ကြွင်းသောအရာအဘို့, Osmo မိုဘိုင်း32 နာရီကြာ၏တူညီသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အပါအဝင်မိုဘိုင်း Osmo 15 ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကစံဗားရှင်းနဲ့ $ 119 ဗူးအကြောင်းအရာ tripod များအတွက် $ 139 ကြာနှင့်ကိစ္စတွင်တင်ဆောင်။ သငျသညျđi၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုဒ်ဆီသို့ (င) စိတ်ဝင်စားလျှင် အမိန့်မှ.
Xiaomi ကအတူပူးပေါင်း Samsung ကမိတ်ဆက် 108 MP ကင်မရာ sensor ကို
သာ HarmonyOS ၏နေကာအပေါ်% 10 မှ 15 ၏တစ်ဦးကကော်မရှင်?
အဘယ်သူမျှမက, Samsung Galaxy Note 10 ၏ကိုယ်ထည်သံမဏိမဟုတ်ပါဘူး
People : “C’est moche !” : la photo de Sophie Davant au naturel fait l’objet d’une vive polémique sur la toile
နောက်ဆုံးပေါ် & # 039 ထိတွေ့မိဖုရား; လက်နက်များ & # 039; နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူပြောပါတယ် - "အဓိကလုံခြုံရေးပြဿနာ" & # 039;
အိန္ဒိယ: အဆိုပါရထားလမ်း2အောက်တိုဘာလကနေတစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်အသုံးမကြလိမ့်မည် | အိန္ဒိယသတင်း